IBAD Guild Obsidian House: I-25 yabantu abaMnyama Cinga ngeKhaya leKamva - Uyilo Lokuphefumlela
IBAD Guild Obsidian House: I-25 yabantu abaMnyama Cinga ngeKhaya leKamva
Impendulo ekuphelelweni lithemba inokuba yiyo njani ithemba? Oko, utsho umyili wezakhiwo uNina Cooke John, yayingumbuzo osisiseko emva koMdwebi oMnyama + we-Designers Guild's Obsidian Virtual Concept House, indawo yokudlala ebonakalayo namhlanje. Kuyo, i-25 ye-creators-i-architects, i-designers ngaphakathi, amagcisa, abenzi, kunye nokuninzi-baye baqonda ikhaya losapho oluMnyama ngekamva kwiprojekthi esebenza njenge-referendum yoyilo, ubuhlanga, kunye nobomi eMelika emva kwe-COVID.
Ukuphelelwa lithemba u-Cooke u-John ukhankanya, ewe, sisifo esikhoyo ngoku, esiye sathabath 'unyawo kumazwe kwihlabathi liphela. E-U.S., Intsholongwane inefuthe elibi kakhulu kubantu abaMnyama baseMelika Abantu base-Afrika baseMelika balaliswa esibhedlele kumaxesha ama-3.7 amaxabiso amaMhlophe amaMelika kunye nokufa kumaxesha ama-2.8 amaqondo amaMhlophe baseMelika kwesi sifo . Ubhubhane uhambelana nomnyaka wokubala ngokobuhlanga kweli lizwe, njengoko ukubulawa kuka-Ahmaud Arbery, uGeorge Floyd, uBreonna Taylor kunye nabanye kwavusa umsindo ekuphatheni abantu abamnyama baseMelika ngamapolisa, iinkqubo zobulungisa kunye noluntu ngokubanzi.
Lo nyaka wesiphithiphithi yayiyintsika ye-Obsidian, eyathi yahluma ukusuka kwimbono kwiintsuku zokuqala zobhubhane: 'Singabaxhasa njani abaqulunqi abo iindawo zabo zokubonisa zazingasayi kubakho?' ukhumbula uCooke John, owathi, kunye noLeyden Lewis, bakhokhela uyilo lwendlu.
Lo mbono wakhawuleza waqabela kwi-Obsidian. Nangona isenokungabi njalo ngokwasemzimbeni Ngokwenyani, i-Obsidian iyabandakanyeka njengayo nayiphi na iprojekthi yoyilo. Kukho indawo 'yokwenyani': i-Oakland, ebalulekileyo njengekhaya leQela eliMnyama eliMnyama kunye nesixeko esiphakathi kokuvela ngokukhawuleza ngenxa yotshintsho lwemozulu kunye nentshukumo yedolophu. Kukho iziqwenga 'zokwenyani' zobugcisa nefenitshala, uninzi lwazo lwenziwe ngamalungu eBADG, isiphumo somzamo wokulungelelaniswa kwentsebenziswano phakathi kweqela. Kukho izinto 'zokwenyani' ezivela kwinani labaxhasi abaziwayo: Caesarstone, Fiskars, Pottery Barn, Resource Furniture, S. Harris, Stark, Thermador, kunye neYLighting, iimveliso zazo ziyafumaneka kuwo onke amagumbi asekhaya. Indlu yengcinga iphakanyisiwe ebomini ngokubonakaliswa kweefotorealistic kunye nokuhlaziywa okuqhubekayo kuya kongezwa kuyo yonke inyanga kaFebruwari, oko kuthetha ukuba 'iindwendwe' zinokujonga kwakhona rhoqo ukufumana izinto ezintsha kumagumbi.
Singayenza njani ukuba ibe mnandi kodwa siyenze iphendule kwindlela ubhubhane obuchaphazela ngayo abantu abamnyama nabamdaka?
Kodwa ekugqibeleni, le projekthi imalunga nokuqaqambisa umsebenzi wabantu abaMnyama abangaphezulu kweshumi elinambini (ngaphandle kwamalungu e-BADG, i-Obsidian ikwabeka uyilo 'lweenkwenkwezi ezimbini' ezikhulayo-enye ingumfundi enye ingcali esencinci- abo izicwangciso zeGuild ziya kubonelela inkxaso nenkxaso). 'Bangathini abaphengululi bezinto ezingama-20 abanokuphendula kwisifinyezo esifanayo ngeendlela ezahlukeneyo? Imibuzo yokupheka uJohn. 'Asililo iqela eliqhelekileyo; Sonke sinamava awahlukeneyo njengabantu abaMnyama eMelika kwaye ngamnye wethu uneempendulo ezahlukeneyo. '
Ezo mpendulo ziqhuba i-gamut-ukusuka kwiindawo ezifuna unxibelelwano lokomoya kunye nezo zenzululwazi kunye nezonyango-kodwa zonke zibonisa ubutyebi bobuchule ekujonganeni nemiceli mngeni ebangelwa yimozulu yangoku, utshilo uCooke John. 'Singayenza njani ukuba ibe mnandi kodwa siyenze iphendule kwindlela ubhubhane obuchaphazela ngayo abantu abamnyama nabamdaka?' Uyaziva. 'Singayenza njani indawo ekhuselekileyo neyamkelekileyo eza kukhuthaza impilo yomzimba neyengqondo yosapho olumnyama?'
Ukulungele ukufumanisa? Fumana umxholo kwindlu engezantsi kwaye Cofa apha ukuze ufumane amava asebenzisanayo.
I-Leyden Lewis Design Studio kunye ne-Studio Cooke John
INdlu eBAD Guild Obsidian
Isicwangciso sika-Lewis no-Cook John sibeka indlu ngaphakathi kweenduli zase-Oakland ngonyaka ka-2025 ngolwakhiwo, abathi, 'lubandakanya ingxubevange yethiyori kunye nokusebenza.' Olona lwakhiwo luphambili-olujamelene nobumdaka, ukudibanisa imbonakalo yeSan Francisco-luhleli kumhlaba kwaye lujikelezwe zizakhiwo ezingaphandle ezibangela ukuba zikwazi ukuzixhasa.
Ingcamango yendlu i-eco-conscious, nayo, idibanisa izinto ezifana nokufudumeza komhlaba, amandla elanga, kunye nokuvuna amanzi emvula kunye nokusetyenziswa kwakhona. Xa zidityanisiwe, abakhi bezakhiwo balibona eli khaya 'njengokucinga ngendawo yokuxhasa impilo yengqondo, yomzimba neyokomoya yosapho oluNtsundu nazo zonke izinto ezibonisa uvuyo nokuyila.'
UMarlon j davis
iikowuti ezintle zebhodi yeeleta
Injongo yokuqala kuyilo lomhlaba kukubonelela ngamava okwamkela nokwamkela uthando lintsapho eziMnyama, utshilo uMarlon J Davis. Ukwenza njalo, wayame kwimeko ekhuselayo yemithi ejikelezileyo, ekrola iindawo ezinikezela ngemfihlo, ukuzimela kunye nokhuseleko.
Indlu ephambili ikhuselwe zizikhonkwane zoqalo kwaye kufikelelwe kuyo ngendlela ethambekileyo enika indawo yokungena. Uthotho lweeberms lwenza ukuba indlela phakathi kwezakhiwo ihlale iphantsi komhlaba, kwaye ikhaya liziva ngathi lihleli kwindawo yalo, ngelixa igadi kunye nendlela yokucamngca ikhuthaza ukusebenzisana nendalo. Isiphumo, utshilo u-Davis, 'yimvakalelo yokhuseleko kunye nentuthuzelo apho ifa lenkcubeko yabantu abaNtsundu libhiyozelwa kwaye ligcinwa ngendlela ezinzileyo.'
Indawo yokuBuyela umva kunye nokuHlala kwakhona: kwi-Afri-Centric Minimalism ngaphakathi kwi-Biophilic Sanctuary
UBernadette Berry wesakhelo se-b
Ngelixa umbono wegumbi lokulala-njengendawo engcwele ungekho ntsha, uBernadette Berry wafuna ukurhabaxa kuyo ngendlela entsha. 'Injongo yam iyonke yayikukudala indawo ebonakalayo elula kunye neyona incinci echaphazela uyilo uJack Travis weenqobo ezili-10 zoYilo lweNkcubeko emnyama ngenkqubo yam ezinzileyo, nepheleleyo yoyilo,' uyacacisa.
Indawo ekhokelayo ibeka phambili ukuxabisa indalo (njengoko kubonisiwe kunxibelelwano phakathi kwendlu nangaphandle kunye nokubhiyozela i-asymmetry kunye nokungafezeki kwindalo), imeko yokomoya (uBarry ubona ukukhanya kwegumbi njengokuthambeka kokukhuthaza) kunye nelifa lemveli. 'Esi sithuba senzelwe ukuba sibe yindawo yomzimba nengqondo, utshilo umyili.
UCheryl R. Riley
Indlu ikwabandakanya indawo ebonakalayo yokoqobo, equlunqwe nguCheryl Riley njengendawo eneendawo ezininzi ezinakho ukunqula izindlu, usizi okanye ukucamngca. `` Ndihlala eSan Francisco ukusukela ngo-1977 ukuya ku-1999, ixesha apho ukucamngca, uphando ngezinto zokomoya zamandulo okanye zeli hlabathi kunye nengqondo / nokwazisa ngomzimba kwakuyinxalenye yobomi bethu, ngenxa yoko ndatsalwa ngoko nangoko kule ndawo, ' uthi.
Iimpembelelo zakhe zazinenkcubeko eyahlukeneyo: Ingcwele ithatha ubume besangqa, ngokubhekisele kwizindlu zabantu base-Ohlone, abemi bokuqala bale ndawo ngoku eyi-Oakland. Iindonga, ezineempawu ze-ombré zibonisa ukuba inkungu inyuka emanzini, ihonjiswe ngothotho lwee-glyphs eziphefumlelwe sisizwe samaHausa, kodwa zitolikwa 'ngelensi yeAfro-Futuristic,' wongeza watsho uRiley.
'Kwakungokwemvelo ukuba ilungu le-BADG lijonge kwilizwekazi lase-Afrika nakwintabalala yalo yenkcubeko,' ucacisa uRiley. 'Ibingumthombo ongapheliyo wokhuthazo kulo lonke uyilo lwam kunye nomsebenzi wobugcisa.'
Udonga lweLifa leSankofa
Eyona ndlu iphambili embindini — umqolo wayo, ukutsho njalo — lelona Donga lililifa eliphambili elenziwe ngumsunguli weBADG kunye noMalene Barnett weceramicist. Iqukethe iithayile zodongwe eziqoshwe ngamagama ookhokho kwaye zacwangciswa ngendlela ebhekisa kubuchule bokwakha obusetyenziswa eNtshona Afrika e-Dogon nase Hausa amasiko (UBarnett uhlala ejonga isithethe saseAfrika emsebenzini wakhe we ceramic). Igama lodonga, uSankofa, ligama eliphuma kulwimi lwesiTwi eGhana elithetha ukuba 'buyela uye kulifumana'-into ebhekisa kunxibelelwano nezinyanya zaseAfrika.
Ucingelwa ukubanakho kwidijithali yokubonisa imiyalezo yeaudiyo nevidiyo, udonga lweSankofa yinto entsha eludongeni lwegalari yosapho, enye ejonge emva kwisithethe nangaphambili kwitekhnoloji. 'Kukho ithuba lokunxibelelana nezinyanya ngokwenza iividiyo kunye nokurekhodwa,' ucacisa uBarnett. 'Nokuba umntu ufuna iingcebiso, iiresiphi, okanye intuthuzelo, uSankofa unokunika ezi mpendulo.'
'Indawo eyamkelekileyo' yeCheryl Umbles ikwanikezela nakwilifa lemveli laseAfrika: 'Njengabantu baseAfrika abahlala kwamanye amazwe, ilifa lethu belisoloko likukuvula iintliziyo zethu namakhaya abanye,' uyacacisa umyili. 'Njengomyili kunye nomninikhaya, ndiyaluthanda ulindelo lweemvakalelo olufunyanwa lusapho kunye nabahlobo xa uqala ukuvula umnyango wakho wangaphambili, kwaye umntu okwelinye icala akanakulinda anqumle umbundu.'
Olu lindelo lwenza isiseko yoyilo lwe-Umbles, olutshata ulwamkelo olufudumeleyo kunye neenkxalabo ezibonakalayo: Igumbi lalo lomgubo linikezela ngeempawu ezingachukumisiyo, kwaye indawo yenzelwe ukuba ibe yindawo ekhuselayo phakathi kwendlu nangaphandle.
Akunakwenzeka ukuba uthethe ngobomi eMntla California ngaphandle kokuchukumisa indawo yewayini ethandekayo, indawo eyayikhuthaza uPenny Francis noCasi St. Julian weKhaya le-Eclectic. 'Besifuna ukuyila eli gumbi losapho eliwuthandayo lo mmandla kunye newayini eyenzileyo,' ichaza le duo, ethiye indawo 'Divai' yegama lesiSwahili elithetha iwayini.
Eli gumbi lilandelayo lingcamlisa ishelfu egobileyo egoso kunye nendawo yokuhlala yokumema- ukuyenza isebenze njengendawo ye-hangout, hayi eyokugcina kuphela. Ifenitshala eqingqiweyo kunye nomsebenzi wobugcisa we-BADG u-Dave McClintonmakes wendawo entle, enobugcisa.
Uyilo luka-Everick Brown
U-Everick Brown ucinga ukuba lixesha lokuba sonke singakhululwa. Ekusukeni 'kwii-hubs zosapho' zanamhlanje ezibeka phambili izixhobo zekhaya ezi-smart kunye nonxibelelwano oluphezulu, i-vestibule kaBrown imalunga nokukhanyisa izinto ezilula. Umbono wethu, indawo yenguqu ebizwa ngokuba yi-Think Play Gather, sisiseko sonxibelelwano, unxibelelwano kunye nomhlaba, utshilo umyili. Igumbi le-analog elishiyekileyo elektroniki, kodwa lityebile kwitekhnoloji nakwimbali. Indawo apho izikhumbuzo, imifanekiso yosapho, umculo kunye neencwadi zingakukhumbuzi kuphela ekhaya, bayayichaza.
IZiko loMphefumlo kunye neFoyer yoSapho
Uyilo lweSitalato iJoy
Nangona ikhitshi linokuba lelona gumbi lisebenzayo emakhayeni amaninzi, uKelly Finley wayefuna ukuyenza le ibeyindawo nje enee-hangout-kunye nombhiyozo woyilo. 'Ukugxila kwimbali nakwinkcubeko yabantu abamnyama baseMelika,' iziko lomphefumlo 'lendlu linemibala eqinileyo, izingqinisiso zehip-hop, kunye nezinto zemifanekiso eziza kukhuthaza abahlali ukuba balale njengayo nayiphi na indawo yendlu,' Ucacisa.
Kodwa uFinley akazange ayikhathalele inkxalabo ekhuthazwe yi-COVID: 'Ikhitshi likwaquka indawo eyahlukileyo yokutyala enepryry ejikelezayo nenobunzima kunye nenkqubo ye-dumbwaiter eyenza ukutya kudlule kwikhabhathi ye-UV-C, ebulala zonke iintsholongwane kunye neentsholongwane,' uyacacisa.
Ifoyer inenjongo efanayo: 'Indawo yokungena yabucala ebavumela ukuba baphalaze ivestment yabo yangaphandle kwaye bazicoce ngaphambi kokungena,' ucacisa uFinley.
Igumbi losapho eligqibeleleyo losapho lwangoku lwe-Afrika-yaseMelika luqala ngamaxabiso emveli, utshilo umsunguli we-Interior Obsession uLisa Turner. Kodwa ngelixa amaxabiso osapho inokuba yeyesiko, uyilo lwayo ayisiyonto ilandelayo: Izitulo zelounge ezigcweleyo zibonakala zixhonywe eluphahleni ngaphezulu kwenkqubo yesofa emodyuli, ngelixa iifestile zomgangatho ophahleni zinika iimbono ezingama-360 ngaphandle. Okokugqibela, nangona kunjalo, ezi zinto zoyilo zexesha elizayo zisebenza ukukhuthaza indibaniselwano, ukuqokelela kunye nokunxibelelana nendalo-iinjongo ezingasokuze ziphele.
Isitudiyo soYilo seKiyonda Powell
'Khawufane ucinge indawo apho emva kokusebenza kosuku, apho unokuhlaziya ubuntu bakho.' Leyo yingcinga eseKiyonda Powell's Wellness Suite, egxile kwimpilo yomzimba nengqondo ngokufanayo. Yindawo ekhuselekileyo ngokusondeleyo ngaphakathi kwengqondo nasemzimbeni ngelixa wonwabele ibhalansi kunye nokudibana kwendawo yangoku yoyilo lwe-bespoke, 'uyacacisa. Igumbi ligcwele izixhobo zokunyathela, izixhobo zeyoga kunye neepilates, kunye nepod yokucamngca okanye yokulala. Ukufakwa kumgangatho, iindonga, kunye nophahla kuphefumlelwe ngokwendalo, kwaye ukukhanya okufihliweyo okuvela ku-Y Lighting kulungiswe kwimizobo eyalatha embindini wegumbi. 'Ngongcwalazi okanye kusasa, le yindawo yokuza nokuba sempilweni kunye nokwenza izinto ezintsha,' utshilo uPowell.
ILaura Hodges Studio
Ukuthatha kukaLaura Hodges kwigumbi lokutyela kufutshane nokuhlanganisana, ukuvuleka, kunye- nesifundo esisentliziyweni yakhe-uzinzo. 'Ndiyile le ndawo ukubonisa ukubaluleka koluntu kunye nokwabelana ngamava enkcubeko ngelixa ndibandakanya indawo enempilo nezinzileyo, utshilo.
Indawo inemisebenzi emininzi, inezihlalo eziguqukayo zebhentshi (ezenziwe ngesikhumba se-vegan cork 'kunye ne-oki efunyenweyo) esebenza ngokulula kwisidlo sedwa njengendibano enkulu ejikeleze itafile emhlophe ye-oki. Indawo esembindini yegumbi yiHodges eseludongeni eyalelwa kwelinye ilungu leBADG, umculi uGlenyse Thompson.
Umzobo kaThompson ubeka ithoni yendawo kwaye bobabini banesibindi kwaye banobabalo kwangoko, utshilo uHodges. Olunye uchukumiso lobugcisa? Izitulo zokubala ezenziwe ngokwesiko, ezimilo zazo zaziphefumlelwe yimixokelelwane yaseAfrika. Ewe i-eco-conscious Hodges ikwabandakanya uhlaza kwisithuba, into eyongeza ubume kunye namandla. 'Eli gumbi yindawo yokusebenzisa izinto ezininzi ekhonza iimfuno ezahlukileyo imini yonke kwaye ixhasa indlela yokuphila yosapho eguqukayo, utshilo. 'Uyilo lubonisa ukubaluleka koluntu kunye nokwabelana ngamava enkcubeko ngelixa kubandakanya indawo enempilo nezinzileyo.'
Istudiyo sikaLeyden Lewis
Hayi, ayisiyi uharry Potter isalathiso. Igumbi likaLeyden Lewis lenzelwe ukuba liqwalasele iimfuno zomzimba womntu. ' Le yindawo ngaphakathi kwekhaya apho kuvavanywa khona impilo yomntu nayo yonke into eyimfuneko yokuthintela kunye nokugcina impilo, icwangciselwe kwaye ilungiswe ngesantya esincinci kunye nokuchukumisa, 'uyacacisa.
Ngelixa usihlalo wasekhaya ogqirha (egcwaliswe ngengalo yeerobhothi yexesha elizayo) kunye nezixhobo zonyango zinokufumaneka ngokulula njengezinyumba, ukufakwa kukaLewis kwegolide kuyenza ifudumale kwaye inyuke. Ubushushu nokukhanya kwezi zinto lilungelo lamandulo lokuzalwa kwabantu abaNtsundu, utshilo uLewis. 'Uhlobo olufudumeleyo lwezibini zegolide kunye nemisebenzi yegumbi kumanqanaba amaninzi.'
Le asiyondawo yokuhlambela yesiqhelo: 'Endaweni yokwenza indlu yangasese enezixhobo ezihlaziyiweyo, bendifuna ukucinga ngaphaya koko xa ndisondela kule ndawo,' utsho uLH. Umseki woyilo uLinda Hayslett. 'Ngeemovie ezinje I-Panther emnyama isibonisa amathuba okuba ubomi bube njani ngokwemiba emitsha neteknoloji, bendifuna ukuba indawo ithathe indawo entsha ngamava okuhlamba. '
Iziphumo ligumbi elinenguqu elibandakanya zonke izinto ezifunekayo kwigumbi lokuhlambela, ewe, kodwa uyilo olukhuthazayo kunye nendawo yokuphumla. 'Endaweni yokuba kwigumbi lokuhlambela, indawo ihambisa umntu ngokungathi uhlamba kumthombo oshushu e-Iceland, okanye uhlamba emahlathini aseAfrika ngelixa ujonge izilwanyana zasendle zihamba, utshilo uHayslett.
Ikwikamva, ikwakhona: 'Igumbi lokuhlambela linokuvavanya abasebenzisi kwakhona kwaye lilinganise amanqanaba okutya kwabo iivithamini kunye neeminerals ukuqinisekisa ukuba bahlala bephilile,' uyacacisa umyili. Lilonke, uthi, 'igumbi lokuhlambela e-Obsidian yindawo yamava osapho oluNtsundu.'
Isitudiyo saMagcisa kunye neGadi
ULinda Allen Uyilo
Umdibaniso wemilo yemizobo, imibala enesibindi, kunye nokuthomalalisa, izinto zendalo zenza indawo kaLinda Allen ibe yindawo efanelekileyo yokubuyela kwindalo yoyilo olungaphezulu. Kodwa ikwathetha nengxaki enzulu: isidingo sabantu abaMnyama bokudala ukuhlawula ngaphezulu ukuze bafumane ukwamkelwa.
'Kumntu ogqithisileyo, imvakalelo yokufikelela' ngaphezulu komndilili 'ukuze abe' ngcono kunenye yeendlela iintsapho zabantsundu ezikhuthaze abantwana bazo ukuba baphumelele ngokulinganayo kwi-American Dream, 'utsho njalo umyili.
Ukuphendula, u-Allen ubize indawo yakhe 'Ndilungile ngokwaneleyo' kwaye wayithatha njengendawo 'yokukhulisa umculi ofunda ngaye ngamabali kunye nobulumko bokwenza ubucwebe kunye neentsimbi, kunye namandla okuphilisa amatye,' ngezinto 'zoyilo lonyango kunye neenkcukacha zesiko ezikhulula igcisa koxinzelelo lwezemfundo nakwengqondo ukwenza ilifa.'
Igumbi lokulala laseRoyal Oasis
Kwigumbi lokulala, uMarie Burgos ujonge kwilifa lenkcubeko elityebileyo labantu abamnyama baseMelika ukumazisa uyilo. 'Umbono yayikukuphindaphinda ukuhlaselwa kwethu njengamava ehlabathi, enkcubeko eyahlukeneyo ngokuvela kubemi bomthonyama, abomthonyama, amaAfrika kunye namaNdiya aseCaribbean,' uyachaza.
Isiphumo ngumdibaniso wezitayile zoyilo, uburhabaxa, iipateni, kunye nezixhobo ezithi, ngaphandle kwemvelaphi yazo eyahlukileyo, kunye benze i-oasis eyamkelekileyo. 'Yeyona ndawo ibalekayo yekhaya,' utshilo uBurgos, 'eyona ndawo isemngciphekweni kwaye yabucala. Yindawo apho unganxibelelana ngokunzulu khona nesiqu sakho kunye nesithandwa sakho, apho usandula ukubuyisa kwaye ubuyisele umzimba wakho, umphefumlo wakho, ingqondo yakho kunye nobuntu bakho.
Ukongeza ebhedini, indawo yokungena kwigumbi lokuhlala, indawo yokuphumla, kunye nendawo encinci, i-suite ikwavula ithambeka elingaphandle, 'ngokubonelela ngokukhanya kwendalo okunesondlo kunye nemibono emangalisayo yepropathi ye-Obsidian,' utshilo uBurgos.
Mna kunye noYilo ngokuBanzi
Endaweni yendawo yokugcina ipatio okanye amagumbi okutshintsha ukubhukuda, uGeneral Judd noCristina Casañas-Judd weMe & Uyilo Jikelele baguqula oku kwakha kwaba ngumthengisi wezamayeza wasekhaya. Indawo ilawulwa ngumyalelo welizwi, isenza ukuba kube lula ukusebenza kunye ne-ultra-hygenic.
'Sicinga ngendawo entsha ebandakanya igadi ehlanganisiweyo yamayeza exutywe neentyatyambo zasendle zendalo, utshilo uCasañas-Judd. Ikhitshi liza kuxhotyiselwa ukuvuna kunye nokugcina amayeza ngexesha leenyanga zobusika ukuze lisetyenziswe njengonyango lwendalo lokuzalwa kwamakhaya ngamanye amaxesha kunye nokukhuthaza impilo yomzimba, yokomoya kunye nengqondo.
KULUNGILE ngeOI Studio
I-OI Studio yangaphandle yeLanai sisisombululo kwi-cabin fever kunyaka ophelileyo. 'Ubhubhane butshintshe ubomi bethu emsebenzini, ngenxa yoko bendifuna ukubandakanya indawo efanelekileyo yokusebenza ngaphandle,' ucacisa umsunguli we-BOA. 'Injongo yam yayikukudala indawo yokusebenza emininzi, ukusebenza ngokuzonwabisa kunye nokuzonwabisa ngelixa ndisagcina indlela yam yoyilo encinci.'
Isithuba sibandakanya i-BOA yokuqala yokufumana ifanitshala yangaphandle kunye nezityalo ze-hydroponic. Ndihleli ndizama ukulima nge-hydroponic, hayi kuphela iipropathi ezinzileyo kodwa kuba ivumela abalimi ukuba bavelise ukutya naphi na emhlabeni, nangaliphi na ixesha lonyaka, kunye nokufumana isivuno esiphezulu ngezixhobo ezimbalwa, uyachaza umyili. Ngokuqinisekileyo kwakungekho-brainer yokubandakanya le ngcamango kwindawo. Eyona mpembelelo yam yoyilo ngokuqinisekileyo ivela kwindalo, ngakumbi ulwandle lweCaribbean. Ndiyazithanda iiplanethi ezinemigca ecocekileyo kwindalo kwaye ndiyayidibanisa nemilo yam. '
UDanielle Fennoy, uHlaziyo lwangaphakathi loYilo
Ngokuhambelana nomxholo wangaphakathi-ngaphakathi wekhaya, uDanielle Fennoy weRevamp yangaphakathi yoyilo wenza igumbi lokuhlala elinelanga elineembono ezingaphazanyiswanga ngaphandle. ' Kakhulu, kunye neembono ze-Oakland Hills, igumbi lokuhlala e-Obsidian limalunga nokubhiyozela kunye nokunxibelelana; kwilifa lethu, kwimpumelelo yethu, kwiitalente zethu ezininzi kunye nokuyila kwethu, kuvuyo lwethu, kwisingqi sethu, kumzabalazo wethu kunye neentlungu, kubunzima bethu kunye nokwahluka, ukuthanda kwethu uMama woMhlaba, utshilo.
Igumbi libandakanya amalungiselelo okuhlala ahlukeneyo ukuxhasa uluhlu losetyenziso. 'Ndisebenza phambili kakhulu, ngenxa yoko iingcinga zam zokuqala yayikukukhulisa indawo yokuhlala, ngelixa ndisavumela abahlali ukuba bavuleleke kwiimbono, eziko lomlilo, nakwabanye, utshilo uFennoy. Kwangelo xesha, bendisoloko ndicinga ukuba xa amaqela amakhulu osapho ehlangana, bahlala beqokelelana ngokwamaqela amancinci ukuze babe namava asondeleyo, nokuba kukudlala idomos, ukumamela ubulumko babadala, ukonwabela umculo, okanye ukubhiyozela imimangaliso eyahlukeneyo kunye nokufezekisiweyo. Kwakubalulekile ukudala indawo apho usapho lonke lwalunokunyaniseka ngokwenene kuba . '
Izinto zangaphakathi zeShakoor
U-Erin Shakoor uthi: `` Injongo yam ngale ndawo kukubonisa izinto ezingalibalekiyo neziphembelela uyilo oluphezulu ngokusebenzisa inkcubeko yabantu abamnyama nabomthonyama. '' Oku kuthetha ukuba kubandakanya iziqwenga zobugcisa 'ezisebenzayo', njengebhodi ebambekayo yesiko leJomo, ezinemilo esekwe kwisitulo sendabuko saseAfrika. Ngenxa yoko, 'umboniso oqhelekileyo wobugcisa obenziweyo ushiywe ngabom kwiseti yasebukhosini, endaweni yoko ubandakanyiwe kwizinto ezisebenzayo.' Ngale ndlela, uthi, 'isuti iba ngamava, hayi nje igumbi lempahla.'
Kwaye la mava abandakanya bonke ubunewunewu obulungele amalungu osapho lwasebukhosini, nawo: 'Kugqityiwe ngayo yonke into esebenzayo kunye neempawu ze-valet ozifumanayo ngaphakathi kwigumbi lokuhlala ehotele, ukongeza kubuchwephesha bobuchwephesha obuninzi kunye nethenda ye-bud ngesipili sokungena Utshilo uShakoor.
Indibaniselwano yakhe yasekhaya / indawo yokugcina ukutya / indawo yokulungiselela i-cannabis, iTulloch yaphefumlelwa ziimarike zaseJamaica, apho abathengisi bathengisa iimpahla zabo phantsi kwesakhelo seetafile zethutyana.
'Indawo yotywala yindawo esebenzela amalungu amaninzi osapho ngamaxesha ahlukeneyo emini, utshilo umyili. Ingqondo yakhe icofa kwizinto ezininzi ezisisiseko sendlu ye-Obsidian, njengokuzinza, ukhuseleko kunye netekhnoloji ephezulu. Esi sithuba sisebenza njengomqobo phakathi kwendlu kunye negaraji yemoto. Ibona ukujikeleza kwekhaya njengoko abantu beza bephuma ekhaya, yindawo yokulungiselela usuku lwakho kunye nokudodobala ekupheleni kwalo. Ngokukhanya okuthobileyo okukhazimla okuvela kwi-polycarbonate nakwikhabhathi yamaplanga, izinto zeshishini laseBrewery zincediswa zezi phalethi zikhanyayo nezendalo.
Igumbi lokuhlala laseMancala kunye neNdlela yokuNqwenela
Iqela loyilo likaNikki Klugh
Kwigumbi lokuphumla, uKlugh wenza indawo yokuncipha xa usaphefumlelwe. Izinto zendalo ezinje ngokutya okuziinkozo okufudumeleyo kunye nokuhlaza okwahlukileyo okupapa kumthubi kwizitulo eziphakanyiswe kwi-icon ye-Sheila Bridges ye-Harlem Toile. 'Ukudibanisa izinto zomlilo, amanzi, kunye nobuninzi beempawu ezizinzileyo zendalo, esi sithuba siyamthuthuzela umntu ofuna ukulamla okanye ukonwabela iglasi yewayini.'
Kodwa ayisiyiyo nje yexesha lilodwa: Ngokulinganayo, indawo yokuphumla ilungele iindibano ezinkulu zosapho ukonwabela imisebenzi yosapho okanye ukuthetha nje ngomlilo kupholile ngorhatya lwaseCalifornia.
McLean kunye neTircuit
'Ukhuthazo lwam luvela kuthando lokuhamba kwam okuninzi, utshilo uMsunguli kaMcLean kunye noTricut uSheryl T. McLean. 'Injongo yam yayikukuzenzela indawo yokuhlala ekhuthaza ukuphilisa, ukuphupha kunye nokuzonwabisa; yindawo onokuvuka kuyo kumanxweme eSeychelles Islands eMpuma Afrika okanye kwiincopho zamanzi abalekayo eZimbabwe okanye nakumxube wesibhakabhaka saseNew York. '
Ukufezekisa loo nto, umyili wayifaka inguqulelo yovavanyo lwe-e-ncwadi 'ye-e-ncwadi' kaGoogle ukubonelela ngamava okwenyani ohambo oluvela kwinduduzo yasekhaya.
Ukwalukile nakwizinto zoyilo ezivela kwihlabathi liphela. 'Ibhodi yentloko ikrwelwe kunye nokumakishwa okuhonjiswe kuninzi lwezakhiwo zemveli zesizwe samaHausa eNigeria, nakwilitye elingaphambili leli khaya langoku. Ukunxitywa kweenwele zemveli zase-Afrika kubonisiwe kwizambatho zesikhumba, ngelixa izixhobo zobhedu eziqinileyo kwimilenze yebhedi kunye neziphatho kwi-wardrobe yeglasi emnyama yenziwe emva kwesigqubuthelo sentloko esibonwe kwiimaski ezahlukeneyo ezivela kwingingqi yeSierra Leone eNtshona Afrika, 'yena uyacacisa. Ngaphandle kwegumbi lokulala ligumbi elimanzi elinendawo yokuhlambela yendalo.
Indlu ye-Obsidian iyaqhubeka ngaphandle, kunye nepatio kunye nendawo yeeyadi eyenzelwe nguNiya Bascom kunye no-Anishka Clarke we-Ishka Designs ukuba bayinyamezele imbalela, bayeke ukumelana nomlilo, kwaye bajolise ekuqwalaseleni ingqondo-ngefuthe lesitayile esivela eJamaica, apho uCarlke wazalelwa khona.
'Ngokwembali, iinkcubeko ze-BIPOC zigcina imeko kunye neenkcubeko zazo ngokulungisa iindlela ezinobuchule kwaye ziyimfuneko,' ichaza le duo. 'Sithwala loo ngcamango kwisisombululo sethu seAtlantic, ngokukhetha kwethu izinto, iimpahla kunye nokulima. Ezi zinto aziqwalaseli okusingqongileyo kuphela, kodwa zikwakhuthazwa lilifa lethu elinzulu kunye neenkcubeko zamandulo. '
Ububanzi obugcweleyo bendlu, indawo yeAtlantic yayiyilelwe ukudibanisa ngaphakathi kunye noyilo lwasekhaya kwaye inephuli enombhalo ongaphantsi komhlaba lilungu leBADG uBradley L. Bowers. 'Injongo yethu yayikukubonisa indawo edibanisa ngaxeshanye, ukuncoma, kodwa kungaphazamisi, batsho abayili. 'Ukuhamba kwendalo, okumanzi kuyilo lwethu kudibanisa esona sakhiwo siphambili se-angular ukuya kwindlu yamachibi embhoxo, ngelixa ivumela amagophe kunye nokuhlaza kuthambisa imiphetho.'
ULynai Jones, uMitchell Mnyama
Ukuyila indawo ebonakala intle ebumnyameni ayisiyonto ilula, kodwa yilento kaJones, wesitudiyo sephepha lodonga uMitchell Black, aphumelele e-Escape, kwigumbi lokuhlola ngaphakathi endlwini. Umceli mngeni wam yayikukuyila indawo ebonakalayo ebonakalayo esebenza kakuhle xa izinto zoyilo zinyamalala ebumnyameni, utshilo.
Ukufezekisa loo nto, uJones wajonga kubutyebi obucekeceke kunye neplush, ifanitshala etofotofo ebandakanya ukubamba ngokungathi kubuhle. 'Umboniso bhanyabhanya usebenza njengesiphelo kubomi bemihla ngemihla, utshilo.
Kukuchukumisa okugqibeleleyo kwikhaya eneneni, elinako konke.
Iindonga ezimbini ezingwevu ezingwevu
Imibono yobugcisa yekrisimesi yezipho
ipine cone umhombiso wobugcisa
iinkukhu zokubopha kunye neash